Azo vinavinaina fa amin'ny ho avy, ny fiara dia ho lasa toeram-ponenana fahatelo ho an'ny olombelona, ​​ary ny olona maoderina dia mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fiara.
Ao an-tanàna, ny fanelezana ny fahalotoan'ny rivotra dia tsy mitovy, ny manakaiky ny lalambe dia vao mainka matotra ny fandotoana.
Ny mpankafy ny rafi-drivotra mitondra fiara dia mitroka fantsona sy etona manimba ary mitsoka azy ireo mivantana amin'ireo mpamily sy mpandeha.
Ny sivana HEPA amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny polypropylene na fitaovana hafa mifangaro. HEPA sivana dia ekena iraisam-pirenena ho fitaovana sivana mahomby indrindra.
Ny firafitry ny singa sivana tafiditra ao aminy dia mampihena tsara ny fanoherana ny rivotra, ary ny fividianana rivotra tsara dia mahatonga ny rafitry ny mpanadio ho an'ny fanadiovan-tena tsaratsara kokoa sy ny vokatra fanadiovana tsara kokoa. Ny fanatsarana ny rafitra dia mitondra fanatsarana ny habaka ihany koa.
Sivanina ny volo, ny vovobony ary ireo potipotera lehibe hafa, sivana PM2.5, bakteria sy virus, fofona sivana, formaldehyde, tv0c ary ireo entona manimba hafa.
Ny sivana metaly metaly dia manana tombony amin'ny habetsaky ny rivotra, fanoherana kely, fanadiovana miverimberina ary androm-piainana maharitra.
Ny sivana voalohany amin'ny fahombiazan'ny pleat dia misy akora fanasiana fibre synthetic voalohany, rafitra aluminium ary harato metaly. Izy io dia manana tombony amin'ny habetsaky ny rivotra, fanoherana ambany ary androm-piainana maharitra. Afaka manivana sombin-vovoka ≥ 5um amin'ny fomba mahomby amin'ny rivotra izy ary ampiasaina amin'ny ankapobeny amin'ny filtration ny fitaovana fanamafisam-peo isan-karazany.
Ny sivana takelaka voalohany amin'ny fahombiazana voalohany dia misy akora fanasiana fibre synthetic voalohany, rafitra aluminium ary harato metaly. Azo zaraina amin'ny sivana G3 sy G4 karazana sivana fahombiazana voalohany.
Ny sivana fahombiazan'ny kitapo dia vokarina amin'ny fitaovana sivana fibre simika avo lenta. Izy io dia manana tombony amin'ny habetsahan'ny rivotra lehibe, fanoherana ambany, fahombiazan'ny filtration avo lenta ary androm-piainana maharitra. Ny haavon'ny fahombiazana dia mizara ho F5, f6f7, F8 ary F9, ary ny fahombiazan'ny filtration antonony ny fomban'ny valin'ny habakabaka atmosfera dia 45%, 65%, 85%, 95% ary 98%.